Gunyana 3, 2018 arun
Miedzo guta Japanese blockchain-kwakavakirwa paIndaneti kuvhota
A hurumende guta Japanese wava mumwe yokutanga munyika Vakaedzawo hurongwa blockchain anotsanangura kuti anoita vagari vakakanda mavhoti kuti kusarudza mapurogiramu kukura yomunzvimbo. Hurumende Tsukuba, guta inozivikanwa basa raro kukura sayenzi kubvira kuma1960, Urongwa blockchain bvunzo musi Aug. 28 ne 119 mavhoti vakaungana.
Mushumo vati hurongwa integrates ane chitupa ongororo muchina ane decentralized nomumbure. Pashure kuisa imwe ID kadhi iri muchini ongororo, vavhoti akapfuurira kusarudza mapurogiramu avo vaifarira. The maitiro mberi encrypted uye zvakachengetwa humboo kubva mavhoti avo nomukombiyuta tamper-uchapupu vakagovera Network. Kana chikumbiro chinoratidza akabudirira pashure mamwe ongororo, hurumende dzematunhu anotarisira kuti akudziridze kushumira vanogara dzemakomo, kuzvitsuwa uye dzimwe nyika.
Kraken Daily Market Mushumo 02.09.2018
$86M nhumbi mhiri misika zvose nhasi